Android လုလင်: August 2012
Talking Parrot [Update Version 1.0
ဒါက Update Version နော်
Download Talking Parrot [Update Version 1.0
ရေးတဲ့အချိန် 3:05 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
Talking James Squirrel 2.0's Screenshots
Talking တွေအများကြီးတွေထဲကမှ လုလင်တော့ ဒါလေး ကြိုက်တယ် ဗျာ
ကိုယ်စကားမပြောတော့ရင် သူက ပျင်းလာပြီး အိပ်ငိုက်ပြလိုက်သေးတယ်
နောက်ပြီး ဘေးက ကျောက်ခဲလေးကို ၀ါးစားပြမယ်
နောက်ဆိုးတာက ဖုန်းscreen ကို ပါ ကန်ထဲ့ရင်
ကဲ မွှန်းနေတာ များပြီ လိုချင်ရင် အောက်မှာဒေါင်းစေ
Download Talking James Squirrel 2.0
ရေးတဲ့အချိန် 2:59 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
ဟိုတစ်ခါတင်တဲ့ဖုန်းပေါ်က screen ကိုဖမ်းမယ် Screencast 2.8 ကကောင်းပေမဲ့
statubar ဆွဲလို့မရတဲ့ ဟာတွေနဲ့ ကြုံတော့ အခက်တွေ့တာပေါ့
ဒီကောင်လေးကတော့ အဲလိုstatubar ဆွဲလို့မရတဲ့အခါ သုံးလို့ရတယ်နော်
ဖုန်းကို shake လုပ်လိုက်ရင် အဆင်ပြေပါပြီ
Download screenshot 2.4
ရေးတဲ့အချိန် 2:24 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
Pool Break Demo လို့ခေါ်ပါတယ်
ဒါပေမယ့် ဟိုတုန်းက တင်ထားတဲ့ Android ဖုန်းတွေအတွက် International snooker ဂိမ်း အဲဒါလောက်မမိုက်ဘူးဗျ
ဒါလေးကလဲ ရုပ်ထံက်ကောင်းပါတယ် နဲနဲ တော့ စနိုးစနောင့်ဖြစ်မလားလို့
ရေးတဲ့အချိန် 1:43 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
ဒီ Media Player - trial ကျတော့ တစ်မျိုး ဆန်းတယ်နော်
ဒီplayer က ဗီဒီယိုတွေကြည့်နိုင်သလို
mp3 တွေကိုလည်း ယူပြီး နားထောင်လို့၇တယ်နော်
Download Media Player - trial v.2.2Trial
ရေးတဲ့အချိန် 1:38 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
Stream Media Player 4.0.3
Download Stream Media Player 4.0.3
ရေးတဲ့အချိန် 1:24 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
အရမ်းလန်းတဲ့ live wallpaper လေးပါ
အရမ်းလန်းတဲ့live wallpaper လေးပါ
ရေထဲမှာ ငါးကလေးတွေ သွားလာကူးခတ်နေတယ်
လက်နဲ့တို့လိုက်ရင် ရေလှုပ်သွားတော့ ငါးလေးတွေ က တခြားတဖက်မှာ သွားပုန်းရော
wallpaperပြောင်းလဲသုံးတတ်သူများ ကြိုက်ကြမယ် ထင်ပါတယ်
Download Koi Free Live Wallpaper 1.5
ရေးတဲ့အချိန် 1:00 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
ဘော်လုံးကို ဘယ်လိုထည့်ရမလဲ မတိပါသေးပါဘူး ခင်ဗျာ
ပြီးရင် ဘယ်လိုဆော့ ရလဲ ပြန်ပြောကြပါအုံး ဟီး
ရေးတဲ့အချိန် 12:55 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
SMS/Talk Text Enlarger 1.2
ဒါလေးကလည်း ခဏတုန်းကလို ဆော့ဝဲလေးပါပဲ
သူကတော့ sms စာတွေကို ဆိုဒ်ကြီးကြီးနဲ့ ကြည့်ချင်ရင် သုံးတာပေါ့
မျက်လုံးမှုန်နေရင် ယူကြလေ ဟဲ ဟဲ စတာနော်
ငါတို့ ယူတိုင်းမျက်လုံးမှုန်နေတယ် အောက်မေ့နေသလား မတိဘူးလို့လေ
Download SMS/Talk Text Enlarger 1.2
ရေးတဲ့အချိန် 12:52 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
android sudoku (AndSudoku)
အင်တာနက်ဂျာနယ်ကဟာတောင် တစ်ခါဆော့ ကြည့်တာ
စာတစ်အုပ်ကုန်တွားလယ် ဟီး ခေါင်းကိုက်ပျောက်ဆေးသောက်လိုက်ရတယ်
အဲဒိကတည်းက လန့်တွားလယ် ဆော့တော့ဝူး
သူငယ်ချင်းတို့ ၀ါသနာပါရင်တော့ ယူကြပေါ့
ရေးတဲ့အချိန် 12:46 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
မြန်မာ့မီးကို အံတုရအောင် ဟီးး
မိုးနဲ့ နွားတိုး အစိုးမရသလို သူလည်း အစိုးမရဘူးနော် ဟီး
ရုတ်တရက်မီးပျက်သွားလို့ မီးခြစ်လိုက်ရှာတာလည်း မတွေ့ဘူး ဖြစ်နေရင်တော့
အဲ ကိုယ့်လက်ထဲ ဖုန်းကိုင်ထားရင်ပြောတာ ဟဲ ဟဲ
ရေးတဲ့အချိန် 12:41 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
ဖုန်းမှာ နဂိုစာလုံးတွေသေးလို့ မျက်လုံးမှုန်နေလား ဒါလေးသုံးကြည့်လိုက်နော်
ကဲ ဒီတစ်ခါတော့ စာလုံးသေးတယ်ဆိုလို့အော်နေသူတွေအတွက်
စာလုံးဆိုဒ်ကို ကြီးအောင် လုပ်ပေးမဲ့ app tool လေးလာပါပြီဗျာ
ဆော့ဝဲကို run ပြီးရင် ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ဆိုဒ်သာ ထားလိုက်
Download Big Font (change font size) 2.11
ရေးတဲ့အချိန် 12:36 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
ဖေဖေမေမေ တွေကို ပူဆာတဲ့ တီဗွီ ၈ီမ်းစက်လေးကို သတိရသေးရဲ့လား။
ဒါပေမယ့် ဒီကောင်လေးက ရောင်စုံတုံးလေးတွေနော်
ဘယ်အချိန်ဆော့ ဆော့ ဆော့လို့ကေင်းတဲ့ဂိမ်းပါနော်
ရေးတဲ့အချိန် 12:31 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ငှက်ကလေးတွေကို ကယ်တင်ရအောင် ဆိုတာက
4 Teh Birds ဆိုတဲ့ ဂိမ်းအကြောင်းပြောချင်လို့ပါ
အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့က သူတို့တွေ ဒုက္ခကြားကလွတ်မြောက်အောင်
အနည်းဆုံး အရောင်တူ ငှက်လေး သုံးကောင်ပြည့်အောင် စုပေးပြီး
ပရဟိတစိတ်ဓာတ်နဲ့ ဂမ်းဆော့ချင်သူများ အောက်မှာဒေါင်းလိုက်ပါအုံး။
ရေးတဲ့အချိန် 12:26 PM 1 comment: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
ကတ်ဆက်ခွေတခေတ်ကို ပြန်ပြီး သတိရကြည့်ရအောင်(2)
ဒီနေ့ ကျွန်တော်မွေးနေ့ မှာ သူငယ်ချင်းတွေကို
ဘာလက်ဆောင်မေးရင်ကောင်း မလဲလို့ စဉ်းစားလိုက်တာ
ဒါနဲ့ ဓာတ်ကျသွားတယ် ဗျာ
အဲ ဒါက နောက်တစ်မျိုးနော် ပိုလန်းတယ်
ကတ်ဆက်ခွေတခေတ်ကို ပြန်ပြီး သတိရကြည့်ရအောင်(2) လို့ နာမည်ပေးလိုက်တာ
အခုတော့ ဆော့ဝဲလေးပဲ ဒေါင်းလိုက်ပါအုံး
ရေးတဲ့အချိန် 3:00 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
ငါ့ဓာတ်ပုံတွေ ဗီဒီယိုတွေကို လာမကြည့်နဲ့ ဆိုသူတွေအတွက်( Magic Box (Hidden photos) 1.7)
ပို့က တင်ချင်တယ် လိုင်းကမကောင်းဆိုတော့
ဒီနေ့တော့တင် ဖြစ်အောင်တင်မယ် ဆိုပြီး လိုင်းတတ်တဲ့အချိန်ထိုင်စောင့်နေတာ။
မင်းဘယ်ပြေးမလဲ မရွှေသဲ ဟဲ ဟဲ
ကဲ ကိုကို ညီညီများ အင်းဟာ အင်းဟာ တွေကြည့်တတ်နေပြီလား
ဘာလဲ အင်းဟာ အင်းဟာ ပြန်မမေးနဲ့နော် ဟဲ ဟဲ
ဒီအရွယ်က ဒီလိုပဲလေ ဟီးဟီး
မိဘတွေ တွေ့မှာ စိုးလို့ ကိုယ့်ဖုန်းကိုတောင် ပေးမသုံးရဲဖြစ်နေလား
မမ ညီမတွေရော ဖုန်းထဲမှာ ကိုရီးယား မင်းသားပုံတွေ ထည့်ထားပြီး
သ၀န်တိုတတ်တဲ့ အချစ်တော် လေးတွေ့မှာ ကြောက်နေလား
ကိုကို ညီညီ တွေလည်း မကြောက်နဲ့
မမ ညီမတွေ လည်းတွေးပူမနေဲ့ တော့ နော်
ဒီဆော့ ၀ဲ လေးသုံးပြီး ပတ်ဝေါ့ပေးပြီး ဖွက်ထားလိုက်နော်
ဒီ app ကို ပဲ ပတ်ဝေါ့ပေးပြီး ဖွက်ထားမနေနဲ့နော် ဖောက်တဲ့ လူက တခြားနည်းနဲ့ ဖောက်နေအုံးမယ်
အဲ ဒီတော့ အဲ လိုမဖြစ်ရအောင် uninstall လုပ်လို့ ရတဲ့ app တွေ ရော setting တွေရော ပိတ်ထားမှ
ပိုလုံခြုံမယ်နော် ။တော် ကြာအရှေ့ကဖုံး နောက်ကပေါ်နေမှာ စိုးလို့ပြောတာ
အော် uninstall လုပ်လို့ ရတဲ့ app တွေ ရော setting တွေရောဘယ်လို ဖွက်ရမလဲ ဟုတ်လား
လုလင်ကြိုက်တဲ့ app lock(Smart App Protector(app lo... ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ကျွန်တော် တင်ထားပေးပြီပြီလေ နော့
အခု app ကိုတော့ အောက်မှာယူနော်
Download Magic Box (Hidden photos) 1.7
ရေးတဲ့အချိန် 12:54 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
ကော်ဖီ ချစ်သူများအတွက်MXHome Launcher 3.0.2
ကဲ ကော်ဖီချစ်သူများကြိုက်ကြမယ် ထင်ပါတယ် ။
ကြည့်ရတာ ဒါက ဗားရှင်းအသစ်ထင်တယ် ။ကျွန်တော်လည်း မဒေါင်းရသေးဘူးဗျ။
ဖုန်းထဲမှာ ထည့်ထားတာတော့ရှိတယ်။ နဲနဲလွဲနေမလားလို့။ပုံနှစ်ကို ကြည့်ပြီးပြောတာပါ။
လန်းတယ်နော် ။အဲ ပုံတစ်ကို ကြည့်ကြည့်ပါ။
အဲဒီ သံလိုက်အိမ်မြောင်ရဲ့ အောက်မှာ နာရီ ပုံဆို 6နေရာပေါ့
အဲ အဲမှာ gallary ကို ကြာကြာလေးဖိထားလိုက်ရင်
အဲဒီ နာ၇ီ အဖုံးလေးက ပွင့်လာမယ်နော် ။
ပွင့်လာရင် ပေါ်လာတဲ့နေရာမှာ ကိုယ်ထားချင်တဲ့ app တွေရွေးလို့ရတယ်နော်။
အဲ ဒါတွေက ထူးခြားမှုလေးကိုပြောပြတာပါ။
စိတ်ညစ်တယ် ။ပြန်တော့မယ် နော်။ မေသက်ခိုင်လည်းမျှော်နေလောက်ပြီ ဟာ ဟ ဟာ ဟ။
အဲ အသဲလေးမျှော်နေမှာ စိုးလို့ ဒေါင်းလော့လင့်တောင်ပေးဖို့မေ့သွားတယ် ။
ဆော်တီးနော် ဆော်တီး ဟီးး
Download MXHome Launcher 3.0 3.0.3
ရေးတဲ့အချိန် 12:28 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
ဒီဆော့ဝဲသုံးပြီး သူငယ်ချင်းတွေကို နောက်ရအောင်
ကဲ သူငယ်ချင်း တို့ရေ
ပျင်းနေလား သူငယ်ချင်းတွေကို နောက်မယ် နော်အဲ စမယ်နော်
ဘယ်လို နောက်ရမလဲ ဆိုတော့ ဆော့ဝဲ သုံးပြီးနောက်မယ်ဗျာ
massage အမှန်တကယ် ၀င်မလာပဲနဲ့ ၀င်လာသလိုပေါ့
ဆော့ ၀ဲ လေးကို ဖွင့်လိုက်မယ်
အဲ ပုံကိုကြည့်လိုက်ပါအုံး ပုံ တစ်မှာ satafake call ပေါ့
အခု ဆို ပုံနှစ်ကို ရောက်သွားပါပြီနော်
အဲဒီမှာ ကိုယ်နောက်မဲ့ သူရဲ့ သံယောဇဉ်ရှိတဲ့ သူနာမည်ပေါ့(ဒါမှ သူက ပြာယာခတ်ပြီး ဖုန်းကိုင်မှာလေ နော့)
ပြီးရင် မြားလေးကို လက်တို့လက် ကိုယ်နှစက္ကန့်အကြာမှာ ဖုန်းသံမြည်စေချင်လဲ ပေါ့ အဲဒါရွေးတာနော်
ပြီးရင်တော့ sat fake call နိုပ်လိုက်ရင် ရပါပြီ
sat fake call နိုပ်လိုက်ရင် ညာဘက်အပေါ် ထောင့် မှာ အနီရောင်လေးနဲ့ ပေါ်နေမယ်နော်
ဒီလိုပါပဲ massage လည်း ဒိလိုပဲ လုပ်တာပဲနော်
အဲ တစ်ခုပြောဖို့ ကျန်တွားလယ်
sinple နဲ့ advanced ပေါ့နော်
အဲမှာ advanced ကိုပြောချင်တာပါ
သူက ကိုယ် နောက်ချင်တဲ့ ရက် အချိန် အဲဒါတွေ ပါ ရွေးထားလို့ ရတယ်ဆိုတာပဲ
ကဲ သူငယ်ချင်းများ ပျော်ပျော် နေ သေခဲ ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း
နောက်ရအောင် နော် ။အလွန်အကျွံတော့ မလုပ်နဲ့ပေါ့
တော်ကြာ စိတ်တိုပြီး လက်တီးနဲ့ ထိုးခံနေရအုံးမယ် ဟဲ ဟဲ
Download BOOM! Fake call and SMS Lite 1.2
ရေးတဲ့အချိန် 12:07 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
လက်တို့ပြီတော့ရှာလိုက်အုံးမယ် (Gesture Search 1.4.1)
လိုချင်တဲ့ app ကို လက်တို့ပြီး ရှာချင်သူများ ဒေါင်းလိုက်ပါအုံး
Download Gesture Search 1.4.1
ရေးတဲ့အချိန် 12:01 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
tatoo ကင်မရာ နဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်ကြရအောင်
ဓါတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါ တက်တူးလေးတွေနဲ့ ထည့်ရိုက်တဲ့ ကင်မရာပါ... ။
ရေးတဲ့အချိန် 11:16 AM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
[ROM] HUAWEI C8812 အတွက် firmware များ
HUAWEI C8812 အတွက် firmware ကို ဆိုက်မှာတော့ ရှိပါတယ် ဒါပေမဲ ညီလေးတစ်ယောက်က အစဉ်မပြေလို့ပြတင်ပေးပါဆိုလို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
mediafile လင့် မှ အစဉ်ပြေမယ်ဆိုလို့ရှာပြီးတင်ပေးလိုက်ပါပြီ
C8812 V100R001C92B921(China Telecom) အတွက် ဒီမှာဒေါင်းပါ http://www.mediafire.com/?fa5x6x8nuexg4
C8812 V100R001C92B925(China Telecom) အတွက် ဒီမှာဒေါင်းပါ http://www.mediafire.com/?6jzvdykbd46d1
C8812 V100R001C92B918(05010XDJ) အတွက် ဒီမှာဒေါင်းပါ http://www.mediafire.com/?c6hw3cvo7ab61
ရေးတဲ့အချိန် 12:58 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
Huawei C8812 CDMA အတွက် Root လုပ်နည်း
Huawei C8812 CDMA အတွက် Root လုပ်နည်း ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်
super root.rar ကိုဒီနေရာလေးမှာ ဒေါင်းပါ https://www.dropbox.com/s/3tdcrx6x0lwon1r/SuperRoot.rar
၁။ မိမိ ဖုန်းကို USB debugging ON and unknown source ON,Fast boot OFF လုပ်ထားပေးပါ
၂။ မိမိ ဖုန်း ကို power off လိုက်ပါ 10 စက္ကန့် လောက်စောင်ပါ
၃။ VOLUME DOWN + POWER ကိုနိပ်ပေးထားပါ Huawei logo မှာရပ်နေပါလိမ့်မယ် မိမိ ဖုန်းကို pc နဲ့ ချိတ်လိုက်ပါ
၄။ superrecovery-windows.bat ကို Run လိုက်ပါ 10 စက္ကန့် လောက်စောင်ပါ ပြီရင် battery ဖြုတ်လိုပ်ပါ 10 စက္ကန့် လောက်ပြန်စောင့်ပြီ battery ပြန်တတ်လိုက်ပါ
၅။ VOLUME UP + POWER နိပ်ထားပေးပါ recovery mode တက်လာမပါမယ် reboot system now လုပ်ပေူးလိုက်ပါ ဖုန်းပြန်တက်လာရင် Root
ပြီးသွားပါပြီ supersuer စက်ရုပ်လေးနဲ့ လန်းလို့ ရပါပြီ်
ရေးတဲ့အချိန် 12:51 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
root လုပ်ပြီးတာတဲ့ user အတွက် အထူး မြှင့်တင်ထားတဲ့ အခွင့်အရေးနဲ့အတူ ၊ စွမ်းရည်မြင့်တင်ထားတဲ့
custom software (ROM) ၊custom themes , Performance ၊ battery life တွေရဲ့
အခြေံအားဖြင့် သင့်ရဲ့ Android device ကို ” Hacking ” ပြုလုပ်တာပါ။
root လုပ်ပြီးတာနဲ့ မိမိဖုန်းကို administrator အနေနဲ့ system တခုလုံးကို အပြည့်အ၀
ဥပမာအနေနဲ့ နိူင်းယှဉ်ပြရရင် apple iPhone ရဲ့ iOS ကို jailbreak လုပ်တဲ့ အလားအလာ ပုံစံနဲ့အတူတူပါပဲ။
Root လုပ်လိုက်တဲ့အတွက် သင့် ၀ယ်သုံးတဲ့ Android device ရဲ့ manufacturers or mobile operators
တွေက တစ်စုံတစ်ခုအတွက် အားပေးအားမြှောက်ပြီး သဘောတူညီမူမပေးပါဘူး။
ပြီးတော့ Root လုပ်ပြီးအသုံးပြုတဲ့အတွက် သူတို့က သင့်ကို တားဆီးပိတ်ပင်တာတာတွေ မလုပ်နိူင်ပါဘူး။
ဒါကြောင့် သင့်ရဲ့ Android Phone ရဲ့ တချို့ service တွေကိုအသုံးချဖို့ သင့် root လုပ်ချင်တဲ့ စိတ်ဆန္ဒရှိရင် သင့်ပြုလုပ်နိူင်ပါတယ်။
အခုလို root user အနေအထားအထားရဖို့ သင့်ရဲ့ ဖုန်းကို root ပြုလုပ်ရတဲ့ အစီအစဉ်ကို
Android rooting လုပ်ပြုလုပ်တာလို့ခေါ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ဖုန်းကို Root မလုပ်ခင် သတိထားရမဲ့အချက်
သင့်ရဲ့ဖုန်းကို root မလုပ်ခင်မှာ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ အချက်လေးတွေဖတ်ထားဖို့လိုပါတယ်
သင့်ဖုန်း မော်ဒယ်အမျိုးအစားကြည့်ဖို့အတွက် အလွယ်တကူကြည့်နည်းက ဖုန်းရဲ့
အထူးသဖြင့် new ROM ကိုအစမ်းသုံးကြည့်ဖို့အတွက် system အားလုံးကို သင့် backup လုပ်ထားပြီး
SD Card မှာ သိမ်းထားလို့ရပါတယ်။ new ROM ကိုအစမ်းသုံးကြည့်လိုက်ပါ။ ကြိုက်နှစ်သက်လား … ?
သင့်ဖုန်းမှာ Original ပါလာတဲ့ ROM ကိုသုံးလို့အားရတဲ့အခါ (သို့)
အခြား New Rom အသစ်သုံးချင်တယ်ဆိုရင်လဲ သင့်ရဲ့ Android device ကို
ချိန်းပြီးသုံးနိူင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အခုဆိုရင် သင့် Android device နဲ့
ပတ်သက်တဲ့ ROM တွေက Online မှာ အလွယ်တကူရှာဖွေနိူင်ပါတယ်။
အခုဆိုရင် Android developers တွေအများအပြားရှိပါတယ်။
ကဲ ..ဒီလောက်ဆိုရင် Android မှာ root လုပ်ရတဲ့အကြောင်းအရင်း
ရေးတဲ့အချိန် 12:40 PM2comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
Samsung Galaxy Note Android 2.3.5 Gingerbread ကို Root လုပ်နည်း
အခုဆိုရင် Samsung ရဲ့ Smartphone tablet တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Galaxy Note အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း
Android OS သုံး Phone တလုံးဖြစ်တဲ့အတွက် root လုပ်ဖို့နည်းလမ်းရှိမှာပဲလို့ စဉ်းစားမိကြမှာပါ
With 5-inch, 1280×800 Screen နဲ့ Super AMOLED HD Plus diskplay တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့
Samsung Galaxy Note ကို root လုပ်ကြည့်ရအောင် ……………
Root လုပ်ဖို့အတွက် ပထမဆုံးလိုအပ်တဲ့ files တွေကို download ဆွဲပါ။
. Samsung Kies အားရယူရန်
. ODIN v1.85 အားရယူရန်
. Netchips ClockworkMod recovery Kernel အားရယူရန်
. Superuser zip file အားရယူရန်
ပထမဆုံး su-2.3.6.1-ef-signed.zip ကို Phone SD ကဒ်ထဲသို့ Copy ကူးပါ။
Samsung Glaxy Note အတွက် download ဆွဲထားသော Samsung Kies ကို install လုပ်ပါ။
(Samsung Kies ကို install လုပ်ထားတာက ODIN နဲ့ သင့် device detect သိဖို့ပိုပြီးလွယ်ကူပါတယ်)
ODIN v1.85 ကို run ပါ။
သင့်ရဲ့ device ကို Power off လုပ်ပါ။ ပြီးလျှင် Volume Up and Volume Down အလည်ကိုနှိပ်ထားပြီး
နောက်ထပ် Home button နှင့် Power button ကို တပြိုင်ထဲထပ်နှိပ်ထားပေးပါ ။
Volume down : Cancel restart phone တက်လာလျှင်
Volume up ကိုရွေးနှိပ်ပေးပါ ။ Download Mode တက်လာပါမယ်။
download mode တက်လာပြီဆိုလျှင် USB cable နဲ့ သင့် device နဲ့ Computer ကိုချိတ်ဆက်ပေးပါ။
ODIN မှာ သင့် device နဲ့ detect သိပြီဆိုလျှင် ID:COM box မှာ အ၀ါရောင်ကာလာနဲ့ တွေမြင်ရပါမယ်။
PDA button ကိုနှိပ်ပြီး download ဆွဲထားသော netchip-cwm-update2.tar file ကိုရွေးပေးပါ။
ပြီးလျှင် Start button ကိုနှိပ်ပေးပါ။
သင့်ရဲ့ Phone ကို flashed ပြုလုပ်နေပါမယ်။
ID:COM box မှာအစိမ်းရောင်ကာလာနဲ့ PASS ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ Phone က reboot ကျသွားပါမယ်။
Volume Up နှင့် Volume Down ကိုအသုံးပြုပြီး
install zip from sd card > choose zip from sdcard > su-2.3.6.1-ef-signed.zip
ကိုရွေးပြီး Home Button ကို နှိပ်ပေးပါ။
ပြီးလျှင် reboot ကိုရွေး Home Button ကိုနှိပ်ပြီး reboot လုပ်ပေးပါ။
reboot ပြန်တက်လာပြီး SuperUser တွေ့ရပြီဆိုလျှင် သင့်ရဲ့ device ကို
- ဖုန်းရဲ့ recovery mode ကိုသွားပါမယ် ။ အဲတွက် reboot ပြန်တက်လာပြီဆိုလျှင်
Volume Up, HomeButton နှင့် Power Button ကိုနှိပ်ထားပါ။
Recovery mode သို့သွားပါမယ်။
Samsung logo တက်လာပြီးသွားရင် recovery mode တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ Home + Power ခလုတ် လွတ်ပေးပါ။
- Recovery mode ထဲမှအသုံးပြုဖို့တွက် VOLUME UP နှင့် VOLUME DOWN ပြီးတော့ HOME ခလုတ်ကို အသုံးပြုပါမယ်။
- Volume Down ခလုတ်ကို တချက်ချင်းနှိပ်ပြီး recovery mode ထဲမှ
” apply update from sdcard ” ကိုရွေးပြီး
- Volume Down ခလုတ်ကို တချက်ချင်းနှိပ်ပြီး
install zip from sd card >> choose zip from sdcard >> su-2.3.6.1-ef-signed.zip
ကိုရွေးပြီး HOME ခလုတ်နှိပ်ပေးပါ။
(ဖိုဒါနဲ့ထည့်ထားဆိုရင် ဖိုဒါထဲသွားပြီး su-2.3.6.1-ef-signed.zip ကိုရွေးပေးပါ ) ။
- Root file install လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလျှင် ” reboot system now ” ကို ရွေးပြီး ဖုန်း reboot ကျတာကိုစောင့်ပေးပါ။
ဖုန်းပြန်တာလာပြီ မိမိဖုန်းမှာ Superuser ကိုတွေ့ရပြီဆိုလျှင် မိမိဖုန်း Root လုပ်လို့ပြီးသွားပါပြီ။
ရေးတဲ့အချိန် 12:29 PM 1 comment: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
Samsung S3 မှာပါတဲ့ Smart Stay လို့ခေါ်တဲ့ feature ကိုတခြား android ဖုန်းတွေမှာအသုံးပြုချင်သူတွေအတွက်ပါ။ Smart Stay ဆိုတာကတော့ ဖုန်း screen ကိုကိုယ်က ကြည့်နေသရွေ့ ဖုန်း screen ကိုလက်နဲ့မထိရင်တောင် ဖုန်းက screen ကိုဒီအတိုင်းပဲထားပေးမှာပါ။ အကယ်၍ ဖုန်းကိုမကြည့်ဘဲထားလိုက်မယ် ဒါမှမဟုတ် မျက်လုံးမှိတ်အိပ်ပျော်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ Screen ကို auto မှိတ်ပေးမှာပါ။
ဒီ app လေးကိုသွင်းဖို့အတွက် ဖုန်းက Android version 2.3 နှင့်အထက်ရှိဖို့လိုပါတယ်။ အောက်က link မှာရယူနိုင်ပါတယ်။ Smart Stay v1.3.4.3 for Android အားရယူရန်
မှတ်ချက် - Video call ပါသောဖုန်းများသာ
ရေးတဲ့အချိန် 12:27 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
MOBILedit! Software ဟာ Mobile Service ကို လုပ်ဆောင်နေကြတဲ့ သူများအတွက် အသုံးဝင်စေမယ့် software တစ်ခုပင် ဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းမှ တဆင့် ကွန်ပျူတာဆီကို Cable ကြိုးဖြင့် ဖြစ်စေ၊ IrDA (Infrared) နှင့် ဖြစ်စေ၊ Bluetooth စနစ်ဖြင့် ဖြစ်စေ ချိတ်ဆက်ပြီးနောက် ဖုန်းအတွင်းမှာပါဝင်တဲ့ စနစ်များကို ပြောင်းလဲမှု ပြုရာတွင် အဆင်ပြေစေနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ရေးတဲ့အချိန် 12:21 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
ပထမဆုံး လိုအပ်တဲ့ software အနေနဲ့ အောက်မှာပေးထားတဲ့ root tools ကိုအရင် download လုပ်လိုက်ပါ။ Sony Xperia root tools အားရယူရန်
ရေးတဲ့အချိန် 12:06 PM 1 comment: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
Android ဖုန်းမှာ Auto Rotating Error ဖြေရှင်းနည်း
Android Mobile ဖုန်းတွေမှာ တခါတရံ version update ပြုလုပ်ပြီးတဲ့အခါ (သို့) Root လုပ်ပြီးတဲ့အခါ
Phone auto rotating system အလုပ်မလုပ်တာမျိုးကြုံရတက်ပါတယ်။
Auto rotating system ဆိုတာသိပြီးသားသူတွေလဲသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။
မိမိဖုန်း Screeen က မိမိအသုံးပြုသလို့ vertical to horizontal လှည့်ပြောင်းပေးတဲ့ Auto rotationg system ကိုဆိုလိုတာပါ။
Android ဖုန်း မှာ Auto Rotating Error
၁. Version Update မလုပ်ချင်က Auto rotating system က အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
vertical to horizontal အပြန်မလှန် ဘယ်လောက်ပြောင်းပြောင်းအလုပ်လုပ်တယ်။
၂. - version update ပြုလုပ်ပြီးတဲ့အခါ (သို့) Root လုပ်ပြီးတဲ့အခါ Phone auto rotating system အလုပ်မလုပ်တော့ဘူး။
- auto rotate feature ကို enable ၊ disable လုပ်လဲမရဘူး ။
- မိမိ Android Mobile Phone (or) Tablet ကို Setting Reset ချလဲ Auto rotating system ပြန်ကောင်းမလာဘူး။
Android ဖုန်း မှာ Auto Rotating Error ဖြေရှင်းနည်း
ဥပမာအနေနဲ့ Samsung Galaxy S နဲ့အောက်မှာဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
အဆင့် ၁ : Home Screen မှ Menu button နှိပ်ပြီး Settings ကိုသွားပါ။
အဆင့် ၂ : Diskplay ကိုရွေးပြီး နှိပ်ပေးပါ။
အဆင့် ၃ : အောက်သို့ရွေ့ပြီး Horizontal calibration ကိုနှိပ်ပေးပါ။ ပြီးရင်တော့
အဆင့် ၄ : ဖုန်း မျက်နှာပြင်ကို ရေပြင်ညီ စားပွဲပေါ်မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် မှောက်ထားပေးပါ။
ဖုန်းအောက်ခြေပိုင်း တ၀က်ကို စားပွဲခုံအစွန်း မှာ calibration button နှိပ်ဖို့
( ဖုန်း မျက်နှာပြင်ကို မမှောက်ပဲနဲ့ ထားပြီးလုပ်လို့ပါတယ်၊ ဖုန်းအောက်ခံ ကာဘာ ဒဇိုင်း
အနေအထားတွေနဲ့ အဆင်မပြေမှာစိုးလို့ပါ )
အဆင့် ၅ : ဖုန်း မျက်နှာပြင်အောက်ကနေ calibration button ကိုနှိပ်ပေးပါ။
Calibrated box ပေါ်လာတဲ့အခါ calibration ပြုလုပ်လို့ပြီးဆုံးပါပြီ။ vertical to horizontal လှည့်ပြောင်းကြည့်ပါ ။
Auto Rotating Error အဆင်ပြေစွာ ဖြေရှင်းပြီးသွားပါပြီ
calibration အစိမ်းရောင် ဘောလုံးလေးက အလည်မှာရှိနေပါလိမ့်မယ်။
အခုဆိုရင် သင့်ရဲ့ Android Phone (or) Tablet မှာ Auto Rotating Error ဖြေရှင်းနည်းကို
ရေးတဲ့အချိန် 11:55 AM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
ဖုန်းမှာ နဂိုစာလုံးတွေသေးလို့ မျက်လုံးမှုန်နေလား ဒါ...
ငါ့ဓာတ်ပုံတွေ ဗီဒီယိုတွေကို လာမကြည့်နဲ့ ဆိုသူတွေအတ...
လက်တို့ပြီတော့ရှာလိုက်အုံးမယ် (Gesture Search 1.4....
Samsung Galaxy Note Android 2.3.5 Gingerbread ကို ...
Sony Xperia အမျိုးအစားဖုန်းများကို အလွယ်ဆုံး root ...
Android ဖုန်းနဲ့ Tablet ပေါ်ကနေ သူများတွေရဲ့ ကွန်ပျ...
Android ဖုန်းဖြင့် လူတကာကို နောက်ချင်သူများအတွက် A...
Android အတွက် ဘယ် videosကိုမဆို ကြည့်လို့ရတဲ့ apk
Super Bluetooth (Phone)
Symbian OS သုံး Nokia Touch Screen ဖုန်းတွေအတွက်ြ...
Android ဖုန်းတွေအတွက် မြန်မာပြက္ခဒိန် MM Calendar
Sound Best Player
AndroVid Pro Video Editor v1.1.1 APK (video edit လ...
Solar Charger တဲ့ဗျာ
ဘိလိယက် ချစ်သူများအတွက် နောက်တစ်မျိုးနော်
'Android ဖုန်းများအတွက် Dropbox Account 48GB ရရှိေ...
Androdd Application ရေးသားနည်း မြန်မာလို စာအုပ်
MyBackup Pro V3.2.2 For Android [Root]
android ဖုန်းပေါ်မှာ drum တီးမယ်(ပျော်ပျော်ပါးပါးပေ...
IM+Pro V6.3.4 For Android
FaceLock Visidon AppLock - For Android
HD Full Screen Caller ID For Android
Sprinkle HD Pro V1.7.2 For Android
Bunny Shooter V2.3 For Android
Friendcaster Pro Facebook - For Android
Guitar Hero6Warriors of Rock Pro V1.2.2 For Andr...
Apple Themes iLauncher Pro V2.1.11 For Android
Go Locker V1.35 & Apple Locker V1.5 - For Android
Android ဖုန်းတွေကို pc မှာ အင်တာနက်သုံးမယ်
Android ဖုန်းတစ်လုံးကို ကွန်ပျူတာပေါ်ကနေ သုံးကြည့်ြ...
Huawei C8812 ကို ROOT လုပ်ရအောင်၊ မြန်မာဖောင့်ထည့်...
Samsung Galaxy Y Root လုပ်နည်း
Samsung Galaxy SIII Root လုပ်နည်း
Planet Myanmar Dictionary V1.3 For Android
Android ဖုန်းရဲ့ ပုံမှန်မြင်ကွင်းကို iphone style ...
FaceFighter Gold v1.04 Pro - For Android
Android apk တွေရဲ့ icon တွေကိုကွန်ပျူတာ ပေါ်မယ်မြင်...
ရန်ကုန်-မန်လေး လမ်းညွန် Application
HTC ဖုန်းများကို root လုပ်ခြင်း
sumsaungGalaxy to Pc Net connect ချိတ်နည်း
ကင်မရာပါသော မည်သည့် ဟန်းဖုန်း နှင့်မဆို အင်တာနက် အ...
ဖုန်းပေါ်က screen ကိုဖမ်းမယ် Screencast 2.8
အရေးပေါ် ဖုန်းအားသွင်းဖို့ လိုအပ်နေရင်
တစ်သောင်းတန် ဖုန်းကတ်ကို ပိုက်ဆံမကုန်အောင် ဟတ်နည်း...
လုလင်ကြိုက်တဲ့ app lock(Smart App Protector(app lo...
Galaxy S3 Theme လေးနဲ့လန်းရအောင်
သူငယ်ချင်းတို့ကို မိတ်ဆက်ပေးချင်တဲ့ဆောစ့်ဝဲလ်လေးက ...
Android ဖုန်မှာRoot လုပ်စရာ မလိုပဲ မြန်မာဖောင်.သွင...
Android Gmail အသုံးပြုနည်း
Myandroid Dictionary (Eng-Myan-Eng)